Sucuudiga oo Turkiga ku eedeeyey in Libya iyo Soomaaliya uu argagixiso ku tababaro – Hornafrik Media Network
Sucuudiga oo Turkiga ku eedeeyey in Libya iyo Soomaaliya uu argagixiso ku tababaro
Wasiir u doolaha wasaaradda arimaha dibadda ee Boqortooyada Sucuudiga Caadil al-Jubeeri ayaa dowladda Turkiga ku eedeeyay in ay taageerto koox argagaxiso oo ka dhisan dalal ay kamid tahay Soomaaliya.
Al-Jubeeri ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa’id uu ku qabtay magaalada caasimada u ah dalka Romania halkaasi oo uu booqasho ku tagay.
“Waxaan kasoo hor jeednaa weerarka uu Turkigu ka wado dalka Suuriya, waxaan kasoo horjeednaa taageerada uu Turkigu siiyo mintidiinta ka dagaalamo dalalka Libya, Suuriya iyo Soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiir u doolaha wasaaradda arimaha dibadda ee boqortooyada Sucuudiga.
Turkiga ayaa faragalin milatari ku leh dalalka Suuriya iyo Libya, iyadoona Riyadh ay taageerto kooxaha kasoo hor jeeda Ankara.
Wasiir Caadil ayaa sheegay in dhankooda aysan wax faragalin ah ku lahayn dalalkaas uu soo xusay, taas badalkeedana ay malaayiin doolar oo deeq ah ay siiyaan.
Boqortooyada Sucuudiga ayaa taageerto Generalka mayilka adag ee dagaalka kula jira dowladda uu caalamka aqoonsanyahay ee dalka Libya, Khaliifa Xaftar, halaka turkigana uu cadeestay taageerada uu u hayo xukuumada uu fadhigeedu yahay magaalada caasimada ah Tripoli.
Horay dowladda Qatar oo kamid ah dowladaha taageero Soomaaliya ayaa loogu eedeeyay in ay taageerto kooxaha loogu yeero argagaxisada eek u sugan gudaha Soomaaliya. Markanna waa Turkiga oo dowladda Soomaaliya siiyo taageero muuqato oo Boqortooyada Sucuudiga ay ku eedeeneeso in uu taageero xoogan siiyo mintidiin ku sugan dalal ay ku jirto Soomaaliya.
Xiisada u dhaxeeso dowladaha Turkiga iyo Sucuudiga ayaa sara usii kaceesay tan iyo markii masuuliyiin katirsan Boqortooyada ay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku qaarijiyeen 2018, qoraagii Sucuudiyaanka ahaa ee Jamal Khassoggi kaas oo aad u dhaliili jiray Boqortooyada gaar ahaan dhaxal sugaha boqortooyadaasi Maxamed Bin Salmaan oo dilkaasi lagu eedeenayo.